Bekuphehlelelwa icwecwe lika Sweet Mama eNqadu kuGatyana
December 19, 2021 adminEvent, Local news
Uzakuba nodliwanondlebe ku Mhlobo Wenene uNasizo Mndende
Xhorha – Uzakuba nondliwanondlebe kwisikhululo sosasazo uMhlobo Wenene FM uNasizo Mndende wase Xhorha kwinkqubo ethi iMfundo ngezentlalo ngo Mvulo umhla wamashumi amabini 20 Disemba 2021, ixesha malunga nemizuzu emihlanu emva kwentsimbi yesithoba – 21:05 ngokuhlwa ungaphoswa.
Luyisiphula nengcambu impathombi ulutsha lwaku Mputhi
December 4, 2021 adminEvent, Local news
Dutywa – uMbutho wolutsha iMEP Organisation (Mputhi Encouragement Project) eDutywa uzakube ubambe indibano eParish Hall ngomhla we 4 December 2021 kusasa. Injongo zalendibano kukwenza I “Awareness around GBV” Ngethuba sithetha nomququzeleli walendibano uNosipho Kewuti uthe, “Le ndibano izakuqala ngomngcelele ozakuqala ku Mputhi uyokungena eholweni edolophini eDutywa. Injongo kukulwisana nokuhlukunyezwa kwabantu basetyhini, nempathombi abathi bayifumane. Sizakube sikhumbula no Kwasa Zozo owagetyengwa liqabane lakhe kunyaka ophelileyo, le yindlela esikhumbuza ngayo uluntu nge ntsuku ezilishumi elinesithandathu ezibekwe bucala ukulwisana nempathombi nokuhlukunyezwa komama” utyibele watsho uKewuti ngethuba ethetha no Mbhashe News. Ungathi ubeyinxalenye yalendibano yolutsha ngokuthi ubaxhase eParish Hall edolophini eDutywa.
November 18, 2021 November 18, 2021 adminEvent, Local news
November 17, 2021 adminEvent, Local news
Gatyana: Oku kukwazisa ukuba intlanganiso yokuqala yokubekwa ngokusesikweni kweBhunga lo Masipala wase Mbhashe, ibibekelwe umhla we 17 Novemba 2021 ihlehlisiwe iyakubanjwa ngomhla we 22 ngo Mvulo 2021.
Lomsitho uyakube usasazwa ngqo kwikhasi lonxibelelwano lika Facebook lo masipala nakwijelo losasazo likanomathotholo lase Mthatha, UCR FM